လွမ်ပရာဘွမ်မြို့ - ဝီကီပီးဒီးယား
တည်ရှိသည့် နိုင်ငံ လာအို
စတင်သတ်မှတ်ခြင်း ၁၉၉၅ (၁၉ကြိမ်)
လွမ်ပရာဘွမ်မြို့ (အဓိပ္ပာယ်အားဖြင့် 'တော်ဝင် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြို့' ) သည် လာအိုနိုင်ငံ မြောက်ဘက်အလယ်ပိုင်းရှိ မြို့တော်တစ်ခု ဖြစ်ပြီးအနီးအနားတွင် ကျေးရွာ ၅၈ ခု ရှိကာ ကျေးရွာ ၃၃ ခုမှာ ယူနက်စကို၏ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ ဖြစ်သော "လွမ်ဘရာဘွမ်မြို့" သတ်မှတ်ချက်တွင် ပါဝင်သည်။ ၎င်းအား ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် စာရင်းသွင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းထားသော ဗိသုကာ၊ ဘာသာရေး နှင့် ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ၊ ရာစုနှစ်အချို့ ကြာအောင် ကျေးလက်နှင့် မြို့ပြ ရောနှော ဖွံ့ဖြိုးခဲ့သော လက္ခဏာများ နှင့် ၁၉ ရာစုနှင့် ၂၀ ရာစုအတွင်း ပြင်သစ် ကိုလိုနီ လွှမ်းမိုးမှုများကြောင့် ဖြစ်သည်။
မြို့လယ်ခေါင်တွင် အဓိက လမ်းမကြီး ၄ ခု ရှိပြီး နမ်ခန်းမြစ် နှင့် မဲခေါင်မြစ်တို့ဆုံတွေ့ရာ မြစ်ဆုံတွင် တည်ရှိသည်။ လွမ်ပရာဘွမ်သည် များပြားလှစွာသော ဗုဒ္ဓဘာသာ ပုထိုးများ နှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းများကြောင့် ထင်ရှားသည်။ မနက်တိုင်းတွင် ဘုန်ကြီးကျောင်းအများအပြားမှ ဘုန်းကြီးများသည် လမ်းမများသို့ ဆွမ်းခံကြွလေ့ ရှိသည်။ မြို့၏ အဓိက အထင်ကရ နေရာတစ်ခုမှာ ဖိုးစီတောင် ဖြစ်ပြီး ၁၅၀ မီတာ (၄၉၀ ပေ) မျှ မြင့်မားသဖြင့် မြို့နှင့်ယှဉ်လျှင် အလွန်ကြီးနေသည်။ မတ်စောက်သော လှေခါးဖြင့် "ဝပ်ချောင်စီ" ဘုရားသို့ တက်သွားနိုင်ပြီး မြို့နှင့် မြစ်များကို အပေါ်စီးမှ ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
မြို့တော်သည် ယခင်က လွမ်ပရာဘွမ် ဘုရင့်နိုင်ငံ၏ မြို့တော် ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရှေးဟောင်း အမည်အဖြစ် "ရှန်းသောင်း" ဟုလည်း သိကြသည်။ ယခင်က လာအိုနိုင်ငံ၏ တော်ဝင်မြို့တော် နှင့် အစိုးရ ရုံးထိုင်ရာ မြို့ဖြစ်ခဲ့သည်မှာ ၁၉၇၅ ခုနှစ် ပသက်လာအို အာဏာရသည့် အချိန် အထိ ဖြစ်သည်။ မြို့တော်သည် လွမ်ပရာဘွမ်ပြည်နယ်ရှိ လွမ်ပရာဘွမ် ခရိုင်တွင် တည်ရှိပြီး ပြည်နယ်၏ မြို့တော်နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဌာနလည်း ဖြစ်သည်။ မြို့တော်ဖြစ်သော ဗီယင်ကျန်းမြို့ မှ မြောက်ဘက် ၃၀၀ km (၁၉၀ mi) အကွာတွင် တည်ရှိသည်။ လက်ရှိတွင် မြို့တော်နေ လူဦးရေ အကြမ်းမျဉ်းအားဖြင့် ၅၆,၀၀၀ ခန့်ရှိပြီး ယူနက်စကို ထိန်းသိမ်းထားသော နယ်မြေတွင် နေထိုင်သူမှာ ၂၄,၀၀၀ ခန့် ရှိသည်။
↑ Luangprabang ataGlance (page 2)။ Ministry of Public Works and Transport (Laos)။2February 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 June 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ Application of Information and Communication Technology to Promote Sustainable Development A Case Study: Town of Luang Prabang, Lao PDR (pdf) Tokyo Institute of Technology, Retrieved June 15, 2016
↑ Town of Luang Prabang - Map (in en)။ UNESCO။ 15 June 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Town of Luang Prabang - UNESCO World Heritage Centre (in en)။ UNESCO။ 16 June 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Daniel White (28 January 2010)။ Frommer's Cambodia and Laos။ John Wiley & Sons။ pp. 270–။ ISBN 978-0-470-61583-6။3January 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Factors explaining the abundance of rodents in the city of Luang Prabang, Lao PDR, as revealed by field and household surveys" (in en) (1 March 2008). Integrative Zoology3(1): 11–20. doi:10.1111/j.1749-4877.2008.00069.x. ISSN 1749-4877. PMID 21396046.
↑ General Overview။ 19 April 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 June 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လွမ်ပရာဘွမ်မြို့&oldid=638341" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၅ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၂၀:၄၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။